Integrated Swanyee Social Business Co.,Ltd | Home
Agri Inputs - Vermiliquid & Compost
Integrated Swanyee Social Business Co.,Ltd.
09 730 990 20, 09 431 822 17
SSB is trying to provideaseries of attempts to raise the living standard of the rural poor and at the same time to help them to stand on their own feet. ISSB is dealing with its business in Development Sectors, especially in businesses dealing with rural development activities, and intends to optimize the realization ofasociety’s many different social, environmental and economic objectives for sustainable development .... Read More
Swanyee is trying to reduce the chemical using by farmers up to 25% or free of chemical or fully free of chemical using in farming. Now there has significant impact to the market as farmers improved awareness of efficient use of natural and bio fertilizers, and these impact lead to change the policies of the local authorities and farmers. The price for value and competitiveness of the price impacts .... Read More
Founder & President's Profile
Activities in Social Sector
Room (A-8), Building (138-B1), New University avenue Road, Sayasan Quarter, Bahan Township, Yangon, Myanmar
မြေပြင်ခြင်း ၊ ကြားလိုက်ခြင်း နှင့် ပုံကြွေးခြင်း ပေါ်မူတည်၍ ဇီဝ မြေသြဇာ တစ်မျိုးတည်းအား တစ်ဧကလျှင် ၂၅ Kg (၂) အိတ်မှ (၄) အိတ် အထိ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ယူရီးယား မြေသြဇာ နှင့် တွဲဖက် အသုံးပြုလိုပါက ယူရီးယား (၁) ဆ ဇီဝမြေသြဇာ (၁)ဆမှ (၂)ဆ အထိ ကြဲပတ်ခါနီးတွင် ရောနှော၍ အသုံးပြုခြင်း ဖြင့် အပင်ကြီးထွားမှု လျင်မြန်ပြီး ဓာတုရုပ်ကြွင်း နည်းပါး၍ ရေရှည် အကျိုး ကျေးဇူး ဖြစ်ထွန်း နိုင်ပါသည်။
တီကျစ်ရည်၏ ထူးခြားစွာ အသုံးပြုနိုင်ပုံများ
•စိုက်ပျိုးမြေပေါ်တွင် ရေ(၄)ဂါလံ ဆေးဖြန်းပုံး တစ်ပုံးလျှင် တီကျစ်ရည် တစ်လီတာဘူး (၁)ဘူး နှုန်း ရောစပ်၍ ပက်ဖျန်းလျှင် (၃)ရက်မှ (၇)ရက် အတွင်း သာမန်မြေအား မြေဆွေးအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
•ပျိုးထောင်ပြီး စိုက်ပျိုးရသော သီးနှံမျိုးစုံတွင် ပျိုးထောင်ချိန်၌ ပျမ်းမျှအားဖြင့် ရေ(၄)ဂါလံ ဆေးဖြန်းပုံး တစ်ပုံးလျှင် တစ်လီတာဘူး တစ်ဘူး၏ ၃ ပုံ ၁ ပုံ (တီကျစ်ရည် ၁ ဆလျှင် ရေ ၅၅ ဆခန့်) နှုန်းဖြင့် သီးနှံ အမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ လိုအပ်သလို ပက်ဖျန်းနိုင်ပါသည်။
•တီကျစ်ရည် တစ်မျိုးတည်အား အားဆေးအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ပေါင်းသတ်ဆေး ၊ မှိုသတ်ဆေးမှ လွဲ၍ ကျန်ဓာတုဆေးရည်များ နှင့် ပေါင်းစပ် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ယင်းသို့ အသုံးပြုရာတွင် ဓာတုဆေးရည် မူလ အညွန်းပြည့် (ဥပမာ ရေ ၄ ဂါလံ ဆေးဖျန်းပုံး တစ်ပုံးလျှင် တီကျစ်ရည် လီတာဝက်မှ တစ်လီတာထိ) ပေါင်းစပ် အသုံးပြုနိုင်ပြီး အကျိုးဆက်အနေဖြင့် အပင်ကျန်းမာ ကြံ့ခိုင်ပြီး အထွက်နှုန်း ပိုကောင်းစေပါသည်။
Copyright © Integrated Swanyee Social Business Co.,Ltd. All rights reserved. Developed by MWP ( myanmar web professional ).